Vaovao - tombony 4 amin'ny fizotry ny famokarana sarimihetsika lamba 3M
3M dia orinasa manerantany izay manome vokatra marobe ho an'ny indostrian'ny dokam-barotra sy ny sonia. Miaraka amin'ny fivoaran'ny teknolojia, maro ireo orinasa fanta-daza eran'izao tontolo izao amin'ny fiaraha-miasa maharitra. Ity manaraka ity dia fampidirana ireo tombony efatra amin'ny sarimihetsika boaty 3M mazava, manantena ny hanampy ny ankamaroan'ny mpampiasa.
1. Sarimihetsika boaty 3M hazavana, ity karazana boaty hazavana inkjet avo lenta ity dia misy fanoherana ny toetr'andro any ivelany. Ny sarimihetsika fandefasana dia mifanaraka amin'ny lamba boaty mazava 3M, izay tsy manelingelina ny taratra ultraviolet ary misy lafiny feno toy ny fanoherana ny fahanterana sy ny fanoherana ny fihenan-doha. Ireo mpanamboatra amerikana dia afaka manome toky feno kalitao feno iray taona sy manome toky kalitao;
2. Ny sarimihetsika boaty 3M dia manana fanoherana mahery vaika amin'ny rivodoza sy ny hery ivelany. Izany dia notsapaina sy voamarin'ny mpampiasa lehibe any amin'ny faritra amorontsiraka nandritra ny taona maro. Ary satria ny lamba maivana dia mbola misy elastika ihany rehefa avy nivelatra, dia tsy mora ny manorotoro toy ny acrylic rehefa iharan'ny hery ivelany ivelany;
3. Ny fananganana sarimihetsika boaty 3M dia mety ary fohy ny vanim-potoana fananganana. Ny fomba fametrahana ny lamba maivana amin'ny sarimihetsika dia ny fomba fanorenana tsotra indrindra. Mila manamafy tsikelikely ny tontolon'ny boaty maivana amin'ny vatan-kazo amin'ny alàlan'ny fehin-kibo manokana. Ny ora fanamboarana dia ora vitsivitsy, noho izany dia afaka manatsara ny fahombiazan'ny asa sy mitahiry fotoana be amin'ny fanamboarana eo an-toerana;
4. Ny sary hoso-doko famafazana sary mihetsika 3M dia mitahiry vola. Raha ampitahaina amin'ny maody suction plastika mahazatra dia esorina ny fizotry ny fanokafana ny bobongolo sy ny fitrohana plastika ary ny vidin'ny singa feno dia ambany kokoa noho ny fomba hafa. Raha ampiana ny fanoherana ny toetrandro ivelany maharitra sy ny fitoniana amin'ity fomba ity dia ambany ny vidin'ny singa natokana arakaraka ny ain'ny serivisy.
Avy amin'ny fandalinana etsy ambony ny tombony azo amin'ny sarimihetsika boaty 3M, tsy sarotra ny mahita fa ny fomba mahazatra amin'ny sarimihetsika sy ny lamba maivana dia mitovy amin'ny fahombiazan'ny vidiny, ny fanamorana ny asa, na ny fanamorana ny fampiraisana.